भारतमा एकैदिन ४५ हजारभन्दा बढी संक्रमित, एक हजार बढीको मृत्यु – Gazzab Nepal
२०७७ श्रावण ८, बिहीबार १०:२० मा प्रकाशित
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।
बुधबारमात्रै थप २ लाख ७८ हजार ९ सय २ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने ७ हजार १ सय १७ जनाको मृत्यु भएको छ।
संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकामा थपिएका छन् त्यसपछि ब्राजिलमा धेरै संक्रमित थपिएका छन्।
अमेरिकामा चौबिस घण्टामा ७१ हजार ५ सय १ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने १ हजार २ सय १३ जनाको मृत्यु भएको छ।
योसँगै अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ४६ हजार १ सय ४२ पुगेको छ भने ४१ लाख ७० जना संक्रमित छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार कोरोना भाइरस समाप्त हुनुअघि झन् भयावह हुनसक्ने बताएका थिए।
ब्राजिलमा एकदिनमा कोरोनाका कारण १ हजार २ सय ९३ जनाको ज्यान गएको छ भने ६५ हजार ३ सय ३९ जनाक नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्।
ब्राजिलमा बिहीबार बिहानसम्म भाइरसका कारण ८२ हजार ८ सय ९० जनाको मृत्यु भइकेको छ भने २२ लाख ३१ हजार ८ सय ७१ जनामा संक्रमण रहेको पाइएको छ।
कोरोना भाइरस प्रभावित मुलुकको तेस्रो नम्बरमा रहेको भारतमा बितेको चौबिस घण्टामा १ हजार १ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ भने ४५ हजार ५ सय ९९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २९हजार ८ सय ९० पुगेको छ भने १२ लाख ३९ हजार ६ सय ८४ जनामा संक्रमण देखिएको छ।
भारतमा रहेका संक्रमितमध्ये ७ लाख ८४ हजार २ सय ६६ जना जना निको भएका छन् भने ८ हजार ९ सय ४४ जनाको स्वास्थ्य अवस्था खराब रहेको छ।
भारतपछि कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै मृत्यु मेक्सिकोमा भएको छ।
बितेका चौबिस घण्टामा मेक्सिकोमा कोरोनाका कारण ९ सय १५ जनाको ज्यान गएको छ भने ६ हजार ८ सय ५९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
मेक्सिकोमा हालसम्म भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४० हजार ४ सय पुगेको छ भने ३ लाख ५६ हजजार २ सय ५छ जना संक्रमित छन्।
दक्षिण अफ्रिकामा एकदिनमा ५ सय ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने १३ हजार १ सय ५० जना संक्रमित थपिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ हजार ९ सय ४० पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ३ लाख ९४ हजार ९ सय ४८ रहेको छ।
त्यस्तै इरानमा एकदिनमा २ सय १९ जनामो भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ भने २ हजार ५ सय ८६ नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
इरानमा हालसम्म भाइरसबाट १४ हजार ८ सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ लाख ८१ हजार ४ सयढ १३ जना संक्रमित छन्।
रुसमा एकदिनमा १ सय ६५ जनामो ज्यान गएको छ भने ५ हजार ८ सय ६२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। रुसमा अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ हजार ७ सय ४५ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ७ लाख ८९ हजार १ सय ९० जान छ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर ६लाख २९ हजार २ सय ९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ करोड ५३ लाख ६४ हजार १ सय २० जना संक्रमित छन्। संक्रमितमध्ये ९३ लाख ४३ हजार ७ सय १५ जना निको भइसकेका छन्।
'कर्णाली स्याहार्न' जुटेका डाक्टर नवराज
मंगलगढी चोकबाट पश्चिम (करिब २.४१ किमि) पुगेपछि सडकको बायाँपट्टि बगैंचाले घेरिएको सुन्दर घर भेटिन्छ। जहाँ चराचुरुगीले निःसंकोच आफ्ना गुड लगाउँछन्। बच्चा हुर्काउँछन् र त्यहीं कुनै एक रूखमा फेरि बसाउँछन्। बगैंचाको त्यो दृश्यझै घरमा पनि त्यहाँ धेरै युवायुवतीले आफ्नो भविष्यका रेखा कोरेका छन्। शिक्षाका लागि गाउँदेखि सहर छिरेका उनीहरूले त्यही घरमा […]
२०७७ भाद्र १८, बिहीबार १५:०८
दैलेखमा धमाधम पिसिआर परीक्षण, आजै १०९ जनाको स्वाब संकलन, रिपाेर्ट भाेली (भिडियाे)
२०७७ आश्विन २१, बुधबार १९:०३
२०७७ कार्तिक ४, मंगलवार ०९:५९
दैलेख बजार बन्द कि खुला? कहाँ चुक्याे प्रशासन ? यस्ताे छ वास्तविकता
२०७८ बैशाख २५, शनिबार १७:४३
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने, विश्वासकाे मत पनि नदिने